Global Voices teny Malagasy » Laura Schneider: Tsy mora mihitsy ny niverina nody · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Septambra 2019 5:01 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Schneider Nandika Miranah
Sokajy: Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, gv-2015
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Febroary 2015)
Vao avy nanoratra lahatsoratra tao amin'ny bilaogiko  momba ny fihaonana an-tampon'ny GV aho ary nandrisika ahy i Marianna Breytman mba handefa izany eto. Saingy fampahalalana ankapobeny ho an'ireo tsy mahalala momba ny GV, sy izay nataontsika tany Filipina izany ary iza no mahalala, mety afaka manampy hahazo mpanoratra vaovao aho.
Ka nieritreritra hanoratra zavatra orizinaly aho eto, niaraka tamin'ny sorisory vokatry ny fiovan-kasin'ora izay nifohazana tamin'ny 3:30 maraina, ora aty Arzantina androany. Fihaonana faharoa natrehiko ity ary tsy mora velively ny miverina mody taorian'ny Fihaonambe. Tamin'ny fotoana voalohany nandehanako, nieritreritra aho fa hakamoana izany nefa ankehitriny fantatro fa (vokatry ny) alahelo izany. Tsy mora ny miatrika an'izao tontolo izao rehefa avy miaraka amin'ireo fianakavian'ny GV. Tsy mora ny maka aina sy mahatsiaro ireo fotoana mahafinaritra. Ka nahafantatra aho fa tsy midika fanadinoana akory ny fakàna aina. Dingana fianarana izay manampy antsika hitombo hatrany amin'ny mahairay tambajotra, amin'ny mahairay fiarahamonina ny mijery sary, tag ao amin'ny facebook, ny sioka ary ny horonan-tsary. Tazomy hatrany ny fiarahana.
Nanampy ahy hizara ny iraky GV ny fanatrehako ny fihaonambe, mba hifanaraka kokoa amin'ny toro-lalana sy ny fiarahamonina. Ny ao an-tsaiko dia manohy mihira sy manao dihy valalamanjohy “PIT SEÑOR”. Manoratra ity lahatsoratra ity aho ankehitriny miaraka amin'ny mozika.
36 ora ny sidina miverina any an-trano ary nanantena hahita mpikambana ao amin'ny GV aho. Rehefa tao amin'ny efitra fivoahana JFK, tafahoana tamin'ny mpikambana iray aho, tsy tadidiko ny anarany. Ary nandritra ny minitra roa, nahatsiaro niverina tany Cebu aho.
Tonga tao an-trano, faly aho nahita ny reniko sy ny alikako, eny. Mitohy ny fiainana. Saingy tsy asa mora ny maka aina, manasa ny akanjoko.
Misaotra betsaka ny fiarahamonina GV tamin'ity hirika ity. Raha mety ho 1% farafahakeliny izay misy antsika izao tontolo izao , dia ho tsara kokoa ny zava-drehetra. Vao nanapa-kevitra ny hametraka tanjona amin'ny asako ao amin'ny GV aho: Hiezaka hanao lahatsoratra iray isan-kerinandro aho. Ho vavolombeloko ianareo rehetra!
Manonona fotsiny izay nosoratako tamin'ny lahatsoratro tamin'ny teny Espaniola:
Pase unos cinco días espectaculares en la Conferencia  que se dio durante los días 20 al 26 de Enero y me di cuenta que tengo mucho mas para aprender. Y además pude dedicar tiempo a la fotografía, un modo silencioso de mirar sin ser visto y captar momentos que se guardaran para siempre en imágenes.
Admiro mucho el trabajo que comenzaron y lograron sus fundadores, Ethan Zuckerman  y Rebecca MacKinnon  y eso demuestra que cuando se cree en algo, se puede!
Raha nanontaniana ny antony nidirako tao amin'ny Global Voices aho, dia tsotra ny valinteniko: te-hianatra momba ny asa fanoratan'olontsotra gazety aho, tiako ny fikarohana sy ny kolontsaina hafa. Satria ahafahako mahafantatra izay mitranga eto amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny feo izay tsy miely, tahaka ny fanoratan'olontsotra gazety.
Nandany dimy andro mahafinaritra tamin'ny Fihaonambe natao ny 20 ka hatramin'ny 26 janoary, nahatsapa aho fa manana zavatra betsaka azoko hianarana. Ary afaka nanokana fotoana hakana sary ihany koa aho, fomba fijery mangina tsy misy mahita ary maka sary ireo fotoana izay hitoetra mandrakizay ao anaty sary.
Mahafinaritra ahy ny asa natomboka sy vitan'ny mpanorina azy, Ethan Zuckerman sy Rebecca MacKinnon ary mampiseho izany fa rehefa mino zavatra ianao dia afaka hahatontosa izany!
Antserasera indray mifankahita!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/09/10/141513/
 Vao avy nanoratra lahatsoratra tao amin'ny bilaogiko: http://www.viajesyrelatos.com/2015/02/global-voices-y-mi-viaje-cebu-en-filipinas/
 “PIT SEÑOR”. : https://www.youtube.com/watch?v=D4BLgaqSjFA
 Ethan Zuckerman: https://es.globalvoicesonline.org/about/nuestra-gente/consejo-de-administracion/#zuckerman
 Rebecca MacKinnon: https://es.globalvoicesonline.org/about/nuestra-gente/consejo-de-administracion/#mackinnon